CIN Khabar सल्यानमा मानसिक स्वास्थ्य जटिल बन्दै
सल्यानमा मानसिक स्वास्थ्य जटिल बन्दै स्थानीय सरकारका योजना मानसिक स्वासथ्यमा केन्द्रीत नभएको गुनासो
प्रतीक इच्छुक शर्मा आईतबार, चैत ८, २०७७, ०४:५५:००
स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही समययता मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा चर्चा हुन थालेको भए पनि यस वारेमा समुदायस्तरमा अझै पनि छलफल भएको पाईदैन ।
नीतिगत रूपमा सरकारले मानसिक स्वास्थ्यको सवाललाई अघि वढाएको भए पनि कार्यक्रम बजेट उल्लेखनीय रहेको पाइएको छैन । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएर तीन तहका सरकार निर्माण भएका छन् ।
सिंहदरवार केन्द्रीत अधिकार गाउँमा आएको भनिए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्याभूत गर्ने अझैँ वातावरण बनेको छैन ।
मानसिक स्वास्थ्य भन्नाले के बुझिन्छ ? कुनै पनि व्यक्तिको मनले गर्ने विभिन्न कामहरू जस्तैः सोचाइ, निणर्य गर्ने क्षमता, स्मरण शक्ति, भावना तथा संवेगको नियमन आदिमा व्यक्तिको सामाजिक परिस्थितिसँग मेलखाने गरी सम्पन्न गर्न सक्नु नै मानसिक रूपमा स्वस्थ्य हुनु हो ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार पनि मानसिक स्वास्थ्य भनेको व्यक्तिको सुस्वास्थ्यको अवस्था हो जसमा व्यक्तिले आपूmसँग भएको सामथ्र्यलाई महसुस गर्न, जीवनका सामान्य तनावहरूलाई सहन गर्न र आफ्नो क्षमता अनुसार परिवार र समाजको लागि योगदान गर्न सक्दछन् ।
मानसिक रोग भनेको के हो ? व्यक्तिका मनका भावना, विचार वा सोचाइहरूमा आउने विचलनले गर्दा भावना, विचार तथा व्यवहारमा जुन गडबडी देखिन्छ, त्यसलाई मानसिक रोग भनिन्छ ।
तर हाम्रो गाउँसमाजमा मानसिक रोग देवीदेवताले गर्दा हुने रोग हुने गलत वुझाई छ । यो रोग उपचारगरेर निको हुने भएपनि पूर्व जन्मको पाप वा श्रापले गर्दा यो रोग लाग्ने गर्दछ भन्ने भ्रम छ ।
सल्यान जिल्ला अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक पर्ने रकम र जनशक्तिको अभाव रहेको छ । बिरामी अनुपातमा औषधि र मनोविर्मशकर्ताको अभाव रहेको जिल्ला अस्पताल सल्यानले जनाएको छ ।
मानसिक रोग एक पटक लागेपछि पुनः दोहारिरहने रोग हो । एकपटक मानिसलाई यो रोगले छोएमा जिवनभरि नै छोड्दैन, जसले गर्दा यो रोग लागेका मानिसलाई कुनै पनि कामको अवसर दिनुहुँदैन भन्ने गलत बुझाइ छ ।
यो वुझाइलाई बदल्न पनि समुदायस्तरमा जनचेतनामूल कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ । मानसिक रोगको सफल उपचार मनोचिकित्सक लगायत मनोविद, मनोपरामर्शकर्ताबाट हुन सक्छ । यो कसरी वुझाउने भन्ने सवाल अहिले खडा भएको छ । समुदायस्तरमा बिभिन्न किसिमवाट मानसिक रोग अभिव्यक्त भएको छ ।
आर्थिक समाजीक, राजनीतिक आदि कारणले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बढ्दै गएको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिएन भने यसले दिगो विकासमा ठूलो असर पार्ने देखिन्छ ।
सल्यानमा पनि मानसिक रोगको विरामीको सङ्ख्या वढेको पाइएको छ । जिल्ला अस्पताल सल्यानका डाक्टर प्रदीप शर्माका अनुसार मानसिक रोगहरूमा चिन्ता सम्बन्धी (एन्जाइटी) रोगहरू, दिक्दारीपन (डिपे्रसन), आत्महत्या, मानसिक असन्तुलन, छारे रोग, मद्यपानको लत लगायतका रहेका छन् । चिन्ता रोग, निराशाका विरामीको सङ्ख्या बढेको हो । जिल्ला अस्पताल सल्यानमा प्रत्येक महिनामा ८० देखि १ सय जना बिरामी आउने गरेका छन् ।
डा शर्माले मदाक पदार्थ सेवन, झैझगडा, वैदेशिक रोजगारी आदि मानसिक समस्या वढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बन्दाबन्दी (लकडाउन) अघि र पछि बिरामीको सङ्ख्या बरावरी रहेको छ ।
स्थानीय तहमा मानसिक स्वास्थ्यको विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा रहेको स्वास्थ्य शाखामा मानसिक रोगका बिरामीको रेकर्ड नै राखिएको छैन ।
दार्मा गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख यज्ञ वस्नेत मनोसमाजीक समस्या भएका बिरामी पाइएको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार सडक खानेपानी लगायतका पूर्वाधारमा मात्र स्थानीय सरकारको ध्यान रहेको छ । मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बजेट लगायतका कार्यक्रम नै छैन ।
अहिले सल्यानमा आत्महत्या गर्नुको ८० प्रतिशत कारण मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी डिप्रेशन बढी रहेको छ । मानसिक रोगलाई समयमै ध्यान दिएर कार्यक्रमसहित बजेट ल्याएर अघि बढ्न आवश्यक छ ।
कुमाख गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मानसिंह ओलीले आफूसँग मानसिक स्वास्थ्यको कुनै कार्यक्रम नभएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सामान्य किसिमका रोगी भेटिए पनि सिफारिस गर्ने गरिएको छ ।
स्थानीय तहको मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी र सल्यान अस्पतालको रेकर्डलाई अध्ययन गर्न मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी वढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
चिकित्सक प्रदीप शर्माका अनुसार बिरामी धेरै आउने सल्यान अस्पतालमा मनोविमर्शकता एक जना भएकाले समस्या भएको छ ।
कोरोना रोगबाट बच्न गरिएको बन्दाबन्दीको समयमा आत्महत्या गर्ने घटनामा वृद्धि आएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानको तथ्याङ्क अनुसार २०७६ चैत ११ देखि हालसम्म झुन्डिएर आत्महत्या ३६ र विष सेवनबाट १८ गरी ५४ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । आत्महत्या गर्ने बालबालिकादेखि ४९ वर्ष उमेर समूहका रहेका छन् ।
मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बालवालिकासमेत देखिएको छ । विद्यालयस्तरवाटै मानसिक रोगका बारेमा सचेतना जगाउनु पर्ने देखिएको छ । मानसिक तनावका कारण आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी लक्ष्मण ओलीले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार मानिस बढी महत्वाकाङ्क्षी हुनु, मानसिक तनाव, बहुविवाह, आत्मग्लानी र गरिबीका कारण बर्सेनि आत्महत्या गर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।
मानसिक रोगलाई हलुका रूपमा नलिई यसको उचित परीक्षण गराई मनोचिकित्सक तथा मनोपरामर्शकर्ताको परामर्श अनुसार उपचार गरेमा बिरामीको अवस्थामा सुधार आइ तिनको सुन्दर भविष्यको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
बढ्दै गएको सहरीकरणसँगै महत्वाकाङ्क्षा पनि थपिदै जाने तर महत्वकाङ्क्षा पूरा नहुने, व्यवसायमा असफलता, पारिवारिक बिमेललगायतका कारण आत्महत्या बढ्दै गएको पाइन्छ ।
मानसिक रोगलाई पूणर् रूपमा देविदेवता, बोक्सीको कारण लाग्ने रोग हो, यसलाई निको पार्न देविदेवता, लागुभागु र बोक्सीलाई नै पूजा गरेर शान्त पार्नु पर्दछ भन्ने गलत बुझाइ छ ।
मानसिक रोग एक पटक लागेपछि पूनः दोहोरिरहने रोग हो, एकपटक मानिसलाई यो रोगले छोएमा जिवनभरि नै छोड्दैन जसले गर्दा यो रोग लागेका मानिसलाई कुनै पनि कामको अवसर दिनुहुदैन भन्ने गलत बुझाइ समाजमा छ ।
सिएमसी नेपालका मनोपरामर्शदाता लोकबहादुर विकले दैनिक जीवनमा आउने कठिनाइलाई सामना गर्ने क्षामताको कमि र उनीहरूमा सकारात्मक मनोपरामर्शको अभाव रहेको वताउनुभयो । उहाँका अनुसार परिवारमा कसैलाई मानसिक रोग लागेमा परिवारका अन्य सदस्यले लुकाएर राख्ने र अरुलाई भन्नु हुदैन, लाज हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दछन् ।
मानसिक स्वास्थ्यको विषयलाई समुदायस्तरमा लैजान आवश्यक छ । मानसिक रूपमा स्वस्थ व्यक्ति तयार भए मात्र हामीले चाहेको सुखी र खुसी समाजको निर्माण सकिन्छ । बेलैमा जागौँ, सहकार्य गरौँ अघि बढौँ ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, चैत ८, २०७७, ०४:५५:००
शर्मा सल्यानको रेडियो शारदामा आबद्ध हुनुहुन्छ ।